“Barcelona Waxay Samaynaysaa Xad-gudub” – Inter Milan Oo Eedaysay Barca – Gool24.Net
“Barcelona Waxay Samaynaysaa Xad-gudub” – Inter Milan Oo Eedaysay Barca
Madaxweynihii hore ee Inter Milan, Massimo Moratti ayaa ku eedeeyey Barcelona inay samaynayso dalabyo xad-gudub ah oo ay ka gudbinayso laacibka kooxdaas ee Lautaro Martinez.
Weeraryahanka reer Argentine ayaa xili ciyaareedkan wacdaro ka dhigay kooxda tababare Antonio Conte, waxaana bandhigaas uu kusoo jiitay Barcelona oo la sheegay inay isku dayday inay la xaajooto Inter Milan markii ay labada kooxood ku kulmeen Champions League wareeggii koowaad ee Group-yada.
Moratti oo u warramay wargeyska Tuttosport ayaa waxa uu sheegay in Martinez uu mustaqbalkiisu gacantiisa ku jiro, waxaana uu eedeeyey Barca oo uu ku sifeeyey inay ku hawlan tahay xad-gudub, waxaanu yidhi: “Barcelona waxay samaynaysaa dalabyo xad-gudub ah, wax walbana waxay ku xidhnaan doonaan Lautaro iyo waxa uu doonayo.”
Moratti waxa uu hore usoo jeediyey in haddii Barcelona ay doonayso Lautaro Martinez inay marka hore keento Lionel Messi, laakiin waxa uu hadda sheegay in arrintaasi aanay macquul ahayn, waxaanu yidhi: “Messi waa riyada qof walba, laakiin kama tegayo Barcelona, walina waa ciyaartoyga ugu wanaagsan ee halkaas jooga. Hore waxaanu iskugu daynay inaanu lasoo saxeexano Cristiano Ronaldo, balse qaali ayuu nagu noqday.”
Sannadkii quruxda badnaa ee Jose Mourinho uu wax walba kula guuleystay Inter Milan ee 2010, ayaa wali kasii dhex-guuxaya maskaxda Moratti, waxaana isaga oo ka sheekaynaya xusuustaas uu yidhi: “Quruxda waqtigaasi waxay ahayd xidhiidhkii wanaagsanaa ee aanu lahayn (isaga iyo Mourinho). Ciyaartoy kasta wuxuu lahaa awood sarraysa oo uu shaqo adag ku qaban karayay.”